Rabshado rabshado wata ayaa ka billowday Switzerland oo ka dhashay baasaboorada COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Switzerland War Deg Deg Ah » Rabshado rabshado wata ayaa ka billowday Switzerland oo ka dhashay baasaboorada COVID-19
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Booliiska Bern ayaa xoojiyay dhismaha baarlamaanka waxayna adeegsadeen biyo -mareenno, sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas caag ah si ay xoog ugu kala eryaan dadkii rabshadaha waday.
Iyaga oo tixraacaya kororka tirada kiisaska cusub ee coronavirus, dowladda Switzerland waxay soo saartay Baasaboorrada khasabka ah ee COVID-19 laga bilaabo Sebtember 13.
Dad aad u tiro badan ayaa socod ku maray Bern, iyagoo ku dhawaaqaya “xorriyad” waxayna dhibaateeyaan booliiska.
Booliiska Bern ayaa adeegsaday madfac biyo ah, sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta cinjirka ah si ay u kala eryaan dadkii rabshadaha waday.
Isu-soo-baxyada tallaabooyinka ka-hortagga COVID-19 ee Bern ee mas'uuliyiinta ayaa mamnuucay oo baajiyay qaban-qaabiyaasha, laakiin dad aad u tiro badan ayaa wali soo baxay waxayna socod ku mareen caasimadda dhabta ah ee Switzerland, iyagoo ku dhawaaqaya "xorriyad" iyo dhibaateynta booliiska Bern.
Markii ay habeennimadii dhacday, mas'uuliyiintu waxay ku jawaabeen iyagoo biyo ku weeciyay mudaaharaadayaasha oo ka mudaaharaadaya baasaaboorada COVID-19 ee ay dawladdu amartay. Waxaa sidoo kale jira muuqaal boliiska rabshadaha oo ridaya bambooyinka gaaska ilmada dadka oo ku baahaya baraha bulshada sidoo kale.
Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa walxaha ku tuuray booliiska, iyagoo afuufaya foori iyo buuq.
Fiidiyowyadii hore iyo sawiradii Bern tus dad badan oo ku soo ururaya saldhigga tareenka kuna dhawaaqaya “Liberte!” - 'xorriyad' af -faransiis, oo ka mid ah luqadaha lagu isticmaalo Switzerland. Isla heestaas ayaa loo adeegsaday Faransiiska dariska la ah si looga mudaaharaado baasaboorada COVID-19.
Markii dambe, dadkii ayaa socod ku maray waddooyinka Bern dhanka baarlamaanka.
Booliiska ayaa heegan buuxa ku jiray tan iyo subaxdii, si kastaba ha ahaatee, waxay deyr ka sameysteen hareeraha Bundeshaus, oo ah xarunta baarlamaanka Switzerland.
Dibadbaxayaasha oo ka soo horjeeda baasaboorada cusub ee COVID-19 ee dhowaan la hirgaliyay ayaa waxay isku dhaceen booliska meel ka baxsan dhismaha baarlamaanka. Agaasimaha amniga Bern Reto Nause ayaa ku tilmaamay isku day ah “in lagu duulo qasriga dowladda dhexe,” mas'uuliyiintuna waxay ku jawaabeen inay ku kala eryaan dibadbaxayaasha biyo -mareenno oo ay mamnuuceen isu soo baxyada "aan la oggolayn" ee mustaqbalka.
Isagoo tixraacaya kororka tirada kiisaska coronavirus, Switzerland la soo saaray baasaboorrada COVID-19 ee khasabka ah laga bilaabo Sebtember 13. Shahaadada waxay muujineysaa caddeyn tallaal, soo kabasho ama natiijo tijaabo taban oo dhowaan ah, waana in la soo bandhigaa si loo galo maqaayadaha, baararka, jimicsiyada ama meelaha kale ee dadweynaha ee gudaha ah. Qiyaasta ayaa loo qorsheeyay inay dhacdo Janaayo 2022.